सामसुङको एस–९ र एस–९ प्लस नेपाल भित्रियो , कति पर्छ नेपालमा मूल्य ? हेर्नुहोस – पुरा पढ्नुहोस्……
सामसुङको एस–९ र एस–९ प्लस नेपाल भित्रियो , कति पर्छ नेपालमा मूल्य ? हेर्नुहोस
चैत १३, काठमाडौं । सामसुङले मार्च २३ देखि काठमाडौंमा ग्यालेक्सी एस–९ र एस–९ प्लसको बिक्रि सुरु गरेको छ ।
यी दुई नयाँ फोनहरु लाइल्याक पर्पल, कोरल ब्लू र मिड्नाइट ब्ल्याक गरी तीन रङहरूमा उपलब्ध छन् । सामसङले यी फोन खरिदकर्ताहरुलाई लक्षित गर्दौ १२ हप्ताको लागि १२ सय जीबी डाटा निःशुल्क प्रदान गर्न एनसेलसँग साझेदारी गरेको छ ।
त्यस्तै, सामसुङले यी फोन खरिदकर्ताका लागि शिखर बीमाको सहयोगमा एक वर्षे बीमा गरिदिने जनाएको छ ।
ग्यालक्सी एस–९ प्लसको नेपाली मूल्य १ लाख ४ हजार ९ सय र एस–९ को ९२ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको सामसुङले जनाएको छ । ५ हजारको ‘क्यासब्याक’ अफर छुट गरी ग्रहकहरुले सामसुङ एस–९ प्लसको मूल्य ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ र सामसुङ एस–९, को मूल्य ८७ हजार ९ सय तोकिएको सामसुङले जनाएको छ ।
Prevकोरियामा चटपटे बेचेर नेपालमा समाज सेवा गर्दै, ज्ञानु चौहान ( ज्ञानि मान्छे )……
Next‘जातीय विबिधता, संस्कृतीक विबिधता, भाषिक विविधता र धर्म निरपेक्षता मुलुकका सुन्दरता हुन्’ (भिडियो सहित )
काठमाडौं उपत्यकामा आज मात्रै थप ६ जनामा कोरोना संक्र,मण पुष्टी..
मुसहरले पहिलाेपटक लगाए सामूहिक दशैँ-टीका र जमरा, छाेइछिटाे गर्ने बाहुन पनि भाेजमा सरिक ..
ह्वात्तै बढ्यो आलुको मूल्य, कति पुग्यो ?